Samsung Galaxy S10 ကိုသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည် Androidsis
လူအများစုကလာမယ့် Samsung flagship, ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေရှိတယ်။ တစ်အရင်းအမြစ်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ် TechnoBuffaloအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအလွန်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်အရာနှင့်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ Samsung Galaxy S10 ဗားရှင်းတွင်ကျောဘက်တွင်ကင်မရာသုံးလုံးပါရှိသည်အလားတူပင် Huawei P20 Pro.
အမည်မသိသတင်းပေးသူကဒီထောက်ပြသည်။ ဤအချက်အလက်သည်ယခင်ပေါက်ကြားခဲ့သောအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ terminal ရောက်လာမယ့်ဗားရှင်းသုံးမျိုးကိုဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသုံးမျိုးနဲ့ချိန်ညှိရလိမ့်မယ်။ တစ်ခုကအကုန်အကျသက်သာပြီး၊ အခြားတစ်ခုမှာစံပုံစံဖြစ်ပြီးဗဟိုပုံစံဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံမော်ဒယ်လ်အာရုံခံကိရိယာများကိုသယ်ဆောင်သွားမည့်ဈေးကြီးသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ဒီအပြင်, အခြားဒေတာများကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသထားသည်.
TechnoBuffalo အရင်းအမြစ်အရပစ္စည်းသုံးမျိုးလုံးတွင် 12MP အကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူး (78º FOV) နှင့် 16MP မှန်ဘီလူး (123º super wide-angle FOV) ပါရှိသည်။ Galaxy S10 Plus သည်တတိယမြောက်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်13MP တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူး (45 ° FOV) ဖြစ်မည်။ ဒါဟာအစ, တူသောထောက်ပြသည် က galaxy S9, Galaxy S10 မော်ဒယ်သုံးမျိုးလုံးသည် dual dual aperture နည်းပညာ (f / 1.5 andf/ 2.4) ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် Samsung သည်အာရုံခံကိရိယာသုံးမျိုးလုံးမှဓာတ်ပုံအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်သုံးဆကင်မရာတည်ဆောက်ခြင်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Galaxy S10 Plus ဗားရှင်းကိုလည်းတပ်ဆင်ထားသည်ဟုဆိုကြသည် ကျယ်ပြန့်သောထောင့်နှင့် telephoto မှန်ဘီလူးမှာ optical image ကိုတည်ငြိမ်.
မိုဘိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ဖန်သားပြင်၏အရွယ်အစားကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်- ချုံ့ထားသောဘတ်ဂျက်ပုံစံသည် ၅.၈ လက်မမျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။ ၆.၁ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသောသမားရိုးကျမော်ဒယ်၊ နှင့် 5.8 လက်မထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဗားရှင်း။
ကပြောသည်ပေမယ့်ကံမကောင်းစွာ Samsung က S10 ဖန်သားပြင်တွင်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်, မကြာသေးမီကပေါက်ကြားဒီနည်းပညာကိုလာမည့်နှစ်တွင်စက်ပစ္စည်းထဲမှာပစ္စုပ္ပန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖော်ပြသည်။ အဲဒီအစား, စာဖတ်သူကို device ၏နောက်ကျောအပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိဖွယ်ရှိသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » နောက်ဆုံးပေါ် Samsung Galaxy S10 မှာမူနောက်ကင်မရာသုံးဆဖြင့်ပါလာမည်
Google သည် Inbox ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လတွင်ရပ်ဆိုင်းမည်